Ngwaọrụ DIY kacha mma na ọrụ robotik - Ikkaro
Anyị ga-anwa ịkụziri igwe elektrọnik na robotik sitere na DIY Tutorial site na Nzọụkwụ. Nke a bụ ụwa onwe ya. N'ezie ụwa dị iche iche, igwe elektrọnik dijitalụ, ike, robotik, mechatronics, wdg. Ọtụtụ ubi nwere oke ala.
N'oge a, maka ọrụ Mee N'onwe Gị ọ bụla ma ọ bụ fudge a na-arụ n'ụlọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa iji ihe eletrọniki mee ya ka anyị wee gbalịa ịmụ na ịkụzi elektrọnik.
Anyị ga-elekwasị anya na ọrụ ikpeazụ ma ọ bụghị ịkọwa kọmịkọnị izugbe, ihe niile ga-adị oke mkpa. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ilekwasị anya n’ ịmụ kọmputa elektrọnik anya na free ngwá electronic ọmụmụ
Enwere m olileanya na ị nwere mmasị na isiokwu ndị m nwere.
Usoro elektrọnik n'efu
Hazigharị ozi na weebụ m achọpụtala na a Yotube video nkuzi usoro na eletrọniki na m bipụtara na usoro nke posts (ha bụ "Virtual Tutorials", usoro nke nkuzi iji bido na eletrọniki nke masịrị m nke ukwuu n'oge ahụ) ewepụla na ọwa na-ahapụ ọkwa ndị a na-agaghị eji. Ga-ahụ ọnụọgụ vidiyo, njikọ, faịlụ na edemede na-apụ n'anya oge. N'ileghachi anya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 11 nke ịde blọgụ, ọnụ ọgụgụ nke ozi furu efu na isntanetị bụ ezigbo anụ ọhịa.
Iji nweta ihe niile na-achịkwa ma nwee nkuzi niile iji mụta inweta elektrọnik, ana m achịkọta ha na ndepụta a M ga-emelite kwa oge, ma tinye akụ ọhụrụ na iwepu ndị na-apụ n'anya ma ọ bụ ndị na-adịkwaghị akpali mmasị.
Igwe ihe omuma maka ndi mere, Mastech MS8229
Multimeters bụ ezigbo ndị enyi anyị. Ọ bụrụ na ị bụ Onye mepụtara, ị na-amasị tinker ma ọ bụ na ị chọrọ ịrụzi ngwa na ngwaọrụ ị ga-achọ otu. Eeh, ọ bụrụ na i jiri Arduino kwa.
Ọtụtụ oge, ọkachasị ndị na-amalite na-amaghị nke multimeter ịzụta ma họrọ nke dị oke ọnụ ala site na akara ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị China, ihe na-erughị € 10. Mana ndị a na-adakarị adaba n’oge na-adịghị anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme masịrị anyị ma jiri ya rụọ ọrụ nke ukwuu.
Nkwupụta taa, ọ bụ 50 € multimeter nke nwere ike ọ bụghị nke kacha mma multimeter na ọnụahịa ego a, mana anyị họọrọ ya maka ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ o nwere. Ọ bụ 5 na 1 ngwá ọrụ nke ahụ ga-atọ ndị niile hụrụ n'anya ụtọ ịgbakọ na ịtọsasị ihe. Ma meehiela na ọ bụghị ihe nyocha dị njọ na maka € 50 anyị nwere ihe maka obere oge.
Micro-Micro akụrụngwa akụrụngwa na redio FM na MP3 si SD na USB
Na kaadiboodu igbe, a panel-ugwu MP3 modul, a recycled ọkà okwu na batrị (ihe pụrụ iche),… Nọgidenụ na-agụ ihe
Mfe dimmable ike ọkọnọ
La ọkọnọ ike bụ ihe dị mkpa maka onye ọ bụla nke mgbakọ kọmputa.
Nke a nke m na-ewetara gị ka ejirila obere ihe mejupụta ya, ụfọdụ ejiri ya rụọ ọrụ ọzọ. Ọ na-agbakọta na nkeji ole na ole, na-enye ohere iji nweta volta ọ bụla n'etiti 3 na 34 volts, (karịa ma ọ bụ obere).
Otu esi eme ka oriọna Kitt (Cargbọ ala dị egwu)
Ndewo, ekele gị nke ukwuu maka ịgụ anyị. Oge a ka m ga-akụziri gị omume nke na-eme ihe atụ na nke a na-ahụ anya. Ọtụtụ n'ime omume ndị a na-ahụ naanị site na iji ihe eji atụ ihe, nke a na-ahụ anya na LEDs.
Chee echiche banyere ihe ngosi site na 80 nke uwe ojii, onye na-agba ọsọ egwuregwu na ụgbọ ala dị egwu nwere ọkụ pụrụ iche n'ihu, n'ihi na ọ bụ usoro ahụ. Kitt, ụgbọ ala dị egwu
Ugbu a ka anyị lee -esi mee ka ọkụ nke Kitt, ụgbọ ala dị egwu eji LED wee nwee ike iji ya n'ụgbọ ala gị ma ọ bụ n'ụlọ. Dị ka ịdọ aka na ntị ọ naghị esiri ike ma ọlị, ebe a na Ikkaro anyị na-egosi gị otu esi eme ya na-etinye obere ego na obere oge. Enwere m olileanya na ọ masịrị gị.
Etu ị ga - esi mee Isi mmalite gbanwere + 5, +12, -12 maka DVD n’ọdịnihu
Nnọọ. Nke a bụ edemede mbụ m. Na ihu na ndi editọ ozo n’enye ihe ndi n’emasi obi, echere m na o bu ihe amamihe di na ya ime ka a doo anya na anyi ghotara na obughi ha nile bu ndi okacha-amara na oru aka. Maka nke a na ekele maka eziokwu na ọrụ zuru oke na-abịa, anyị ga-amalite a ngwaọrụ nke ga-azọpụta gị ole na ole euro imegharị ihe maka iji, na-ebelata na-enweghị na-ahapụ ụlọ.
Echiche a mụrụ n'ihi na azụrụ m DVD dị ọnụ ala (ihe na-erughị € 35) mana ọ rụrụ ọrụ zuru oke maka ọnwa 3 ma na enweghị ebe ọ na-agbanye ma kwuo "Enweghị diski", nke a bụ nsogbu nkwonkwo nke kaadị mgbagha, nke n'agbanyeghị ọ bụ kpam kpam dijitalụ, ọ bụghị na ọ dị mfe ịrụzi ya enweghị isi. Echere m otu ụbọchị nke omume m chọrọ isi iyi karịrị 1 Amp, echetara m DVD ahụ ebe a bụ iwu ya. Enwere m olileanya na ọ masịrị gị.
Anyị ga-amalite site na ịmata ihe ihe anyị ga-eji, ihe niile na-egosi na onyonyo, belụsọ iwu na ndozi, ị ga-ahụ ihe eji ya.
Anyị ga-ewere disassembly na wepu niile n'akụkụ kposara, ha adịghị ike ịchọta, ebe ọ bụ na ha na-kpughere, ebe a bụ a foto.
Jikọọ eriri batrị dị mfe
O doro anya na ihe karịrị otu oge ịchọrọ iji batrị nkịtị, AA, AAA ma ọ bụ ... Nọgidenụ na-agụ ihe